နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဆိုတာဘာလဲ ? | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဆိုတာဘာလဲ ?နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေဖြစ်ပြီဆိုရင် လာတတ်တဲ့လက္ခဏာတွေဆိုပြီးရှိပါတယ် ။ အကြမ်းဖျဉ်းတွေး ကြည့်မယ်ဆိုရင် တောင် သွေးကြောဟာ ရေပိုက်လုံးတစ်ခုလို မြင်ယောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲဒီရေပိုက်လုံး နံရံတွေ ထူလာလေလေ သွေးစီးဆင်းတဲ့အပေါက်က ကျဉ်းလာလေလေမဟုတ်ပါလား ။ ဒီလိုမျိုးသွေးကြောတွေ ကို အဆီဖတ်အဆီခဲတွေ ဖုံးပြီးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းကိုတော့ ဆေးပညာအရ Atherosclerosis လို့ခေါ်ပါတယ် ။ သွေးကြောအဆီဖုံးခြင်းဟာ နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောရောဂါ (Coronary heart disease ) တွေဖြစ်တဲ့ Angina (ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း) ၊ Myocardial Infarction (နှလုံးပုပ်ခြင်း ) ၊ Sudden death ( ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်း ) စတဲ့ အရာတွေကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ် ။ နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းပြီး နှလုံး ထဲကို အောက်ဆီဂျင် သိပ်မရောက်တော့ တဲ့ရောဂါကို Ischaemic heart disease (IHD) နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းရောဂါလို့ ခေါ်ကြ ပါတယ် ။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းဟာ တဖြည်းဖြည်းဆိုးလာပြီးကျဉ်း လာတဲ့အခါ နှလုံး ရဲ့အချို့သော ဧရိယာတွေ မှာ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်သော လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် ။ ယေဘူယျကြည့်မယ်ဆိုရင် ဧရိယာတစ်ခု ဟာ သွေးကနေတဆင့် အောက်ဆီ၈ျင် ရောက်လာမှုနည်းသွားရင် အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်ခြင်း Ischaemia ကို စတင်ခံစားရပါတယ် ။ အဲဒီထက်တဆင့်ဆိုးပြီး အောက်ဆီဂျင်လုံးဝမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ပုပ်သွားခြင်း (Infarction) ကို ခံစားရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် IHD ဟာ နှလုံးပုပ်ခြင်း ( Myocardial Infarction) ရဲ့ ရှေ့ပြေး လို့ဆိုလည်းမမှားနိုင်ပါဘူး ။
ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေနဲ့ လာနိုင်သလဲ ?
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရှိပြီဆိုရင် လူက အမောမခံနိုင်တော့ဘူး (အောက်ဆီဂျင် ရရှိမှုနည်းလာ တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ် ။ ရင်တွေတုန်လာမယ် တလှပ်လှပ်ခံစားရမယ် နောက်ဆုံးရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း (Chest Pain ) ကိုခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် chest pain ရှိတိုင်း နှလုံးမှာဖြစ်တယ် သွေးကြောကျဉ်းတာပါလို့ အတိအ ကျပြောလို့မရပါဘူး ။ Chest Pain ဟာ စိုးရိမ်ပူပန်သောကများခြင်း (Anxiety) ဒါမှမဟုတ် အဆုတ် ၊ ကြွက်သားနဲ့အ ရိုးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းမှာ ရောဂါတစ်ခုခုရှိခြင်း စတာတွေကြောင့် လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းပြီးအောက်ဆီဂျင်သိပ်မရောက်လို့ဖြစ်တဲ့ Chest Pain ရဲ့ပုံစံတွေကတော့
– Chest Pain ဟာ ရင်ဘတ်ရဲ့ အလယ်ခေါင်တည့်တည့်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
– Ischaemic Chest Pain ဟာ အထူးသဖြင့် ပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာ လည်ပင်းနောက် မေးရိုး နဲ့ လက် အပေါ်နဲ့လက်အောက်ပိုင်းတွေကိုတောင်ပျံနှံ့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ။ အကယ်၍ ရင်ဘတ်အောင့်တာဟာ ဘယ် ဖက် အရှေ့ ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်တယ် ဘယ်ဖက်တစ်ခြမ်းကိုပဲ ပျံ့နှံ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ အခြားအ ချက်ပေါင်း များစွာဖြစ်တဲ့ ကြွက်သားနဲ့အရိုးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ (သို့မဟုတ်) anxiety စသည်တို့ ကြောင့် လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
– နှလုံးအောင့်မယ်ဆိုရင် မစူးရှပဲ ထူပိန်းပိန်း (dull ) ဖြစ်နေပါတယ် ။ ဆွဲဆုပ်ထား သလိုအောင့် ပြီးလေးလံတဲ့အရာကြီးနဲ့ ဖိထားသလို ခံစားရပါတယ် ။ ဓါးနဲ့ထိုးသလို စူးရှပြီးအောင့်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ။
– Anginal pain ဟာ လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေစဉ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး နားလိုက်တဲ့အခါငါးမိနစ်လောက်အတွင်း ပြန်သက် သာ သွားလေ့ရှိပါတယ် ။ စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေနဲ့လည်း ဆိုင်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဒေါသထွက်စရာ ကြုံရတဲ့အ ခါ ပိုပြီးပြီးအောင့်တတ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင်အစာအများကြီးစားထားတဲ့အခါ လေအေးတွေ အတိုက်ခံရ တဲ့အခါ မှာ လည်းပိုပြီးအောင့်နိုင်ပါသေးတယ် ။ ဒါက အကြမ်းဖျဉ်းနား လည်လွယ်အောင် တင်ပြထား တာဖြစ်ပါ တယ် ။ Ischaemic pain ကို ခွဲခြားတဲ့အခြားအချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ် ။ ။
(Risk Factors များ)
– သွေးတွင်းအဆီဓါတ်များသူများ ( Hypercholesterolaemia)
– စိတ်ဖိစီးမှုများသူများ (stress)
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ရောဂါရာဇ၀င်မေးမြန်းခြင်း (history taking ) စမ်းသပ်ခြင်း ( Physical examination) ဓါတ်ခွဲစမ်း သပ်မှုများပြုလုပ်ခြင်း ( Investigation ) စသည်တို့ဖြင့်သိရှိနိုင်ပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ IHD အတွက် အကောင်း ဆုံးဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့ ယေဘူယျအကျဆုံးစစ်ဆေးခြင်းဟာ ECG ဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ECG မှာ IHD ရဲ့ pattern တွေပေါ်နေပြီဆိုရင် ဒါဟာ IHD ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် ။ အကယ်၍ ဘယ်နေ ရာမှာ သွေးကြောပိတ်တယ် ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်းပိတ်တယ် ဘယ်နေရာတွေမှာ ကျဉ်းနေသလဲ စတဲ့ အသေး စိတ်ကို သိဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Coronary Angiogram ရိုက်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါဆိုရင်တော့အဖြေကို တိတိကျ ကျသိနိုင်ပါပြီ ။
ဘယ်လို ကုသမလဲ ?
အဓိကပြောချင်တာကတော့ ဒီအပိုင်းကိုပါ ။ အရင်ဆုံးစစဖြစ်ခြင်း နှလုံးမပုပ်ခင် Myocardial infarction မရခင် နှလုံးတိုက်ခိုက်ခြင်း heart attack မရခင်တော့ေ သာက်ဆေးတွေနဲ့ အရင်ကုသပြီး အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ risk factors တွေကို လျော့ချရပါတယ် ။ သောက်ဆေးတွေထဲမှာရေပန်းအစားဆုံးကတော့ trimetazidine လို့ခေါ်တဲ့ဆေးပါ ။ 20mg ဆေးဆိုရင်တော့တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်သောက်ရပြီး အခုနောက်ပိုင်း ၀င်လာတဲ့ Modified release ဆေးတွေကတော့ 35mg ပါတဲ့အတွက် တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်သောက်ရပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် နိုတ်ထ ရိတ် တွေကို လျှာအောက်မှာ ငုံပေးခြင်းအားဖြင့် မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ သက်သာစေပါတယ် ။ အဲဒါကိုတော့ Sub-lingual nitrol လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ် ။ Isosorbide Dinitrate နဲ့ Isosrobide Mononitrate တို့ဟာ နိုထ ရိတ် မျိုးနွယ်ဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ် ။ ဒီဆေးတွေကလည်း ရင်ဘတ်အောင့်တာကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက်ပေး တဲ့ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် Aspirin တို့လို Clopidogrel တို့လို သွေးကျဲဆေး အကိုက်အ ခဲပျောက်ဆေးတွေ ကိုလည်းတွဲပေးလေ့ရှိပါတယ် ။ Beta blockers ဖြစ်တဲ့ Propanolol ဟာလည်း နှလုံး က အောက်ဆီဂျင်သုံးစွဲမှုကို လျော့ချပေးခြင်းအားဖြင့် pain ကိုသက်သာစေပါတယ် ။ နှလုံးခုန်နှုန်း ကိုလည်းလျော့ကျစေပါတယ် ။ Amlodipine တို့လို Calcium Channel Blockers တွေ ကလည်း သွေးကြောတွေ ကို ကျယ်စေပြီး နှလုံးကြွက်သားတွေရဲ့ excitability နဲ့ Conductivity ကို လျော့စေပြီး သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်းကျစေပါတယ် ။ သွေးတွင်းအဆီများ တဲ့လူနာတွေ ကတော့ သွေး တွင်းအဆီ ကျဆေးတွေပေးခြင်းဖြင့် cholesterol level ကိုထိမ်းရပါတယ် ။
အကယ်၍ Angiogram မှာ သွေးကြောတွေကို သိသာထင်ရှားတဲ့ရောဂါတွေ ပြသနေပြီဆိုရင်တော့ လက္ခဏာတွေ ကလည်း သောက်ဆေးတွေနဲ့ မသက်သာတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကို စဉ်းစား ရပါတော့မယ် ။
၁ ။ Coronary Angioplasty – ပိတ်နေတဲ့ သွေးကြောတွေ ကို သွေးကြောအတွင်း လေသွင်း တဲ့ ဘောလုံးလေး ထိပ်မှာပါတဲ့ ရှည်မျောမျော ပလပ်စတစ် tube Catheter ထည့်ပေးပြီး ကျယ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒါကို Stent ထည့်တယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ် ။
၂ ။ Coronary Artery Bypass Grafting ( CABG ) – လူနာရဲ့ ပိတ်ဆို့နေတဲ့သွေးကြောတွေကို ဖြတ်တောက်ပြီး ပိတ်ဆို့မှုကို သက်သာအောင် သွေးကြောတွေကို ကိုင်းဆက်ကူးခြင်း (grafting ) လုပ်ခြင်းဖြစ် ပါတယ် ။ Bypass လုပ်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ Indications တွေကတော့ အခုနောက်ပိုင်း မှာ limited ဖြစ်လို့လာပါပြီ ။ Bypass surgery သည် ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေ ခြင်းနဲ့ quality of life ကိုသာလျှင် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ် ။ သူဟာ Life expectancy လို့ခေါ်တဲ့ အသက်ရှင်မှု အာမခံချက် ဘယ်လောက်ပေးနိုင်သလဲဆိုတာတော့မရှိပါဘူး ။ သေချာကုသလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ လူနာအများ စုဟာ ပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့ ဘ၀ကို ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကုသမှုတွေထဲမှာ ပုံမှန်လေ့ကျင့် ခန်းလုပ်ခြင်း ၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း ၊ အစားအသောက်ထိမ်းချုပ်ခြင်း နဲ့ လူနေမှု ဘ၀ ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ် ။
Risk factors တွေဖြစ်တဲ့ အဆီများသောအစာများ ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ၊ လှုပ်ရှားမှု မရှိသော လူနေမှုဘ၀ပုံစံ ၊ စိတ်ဖိ စီးမှုများ စတာတွေကို ဖယ်ရှားရပါမယ် ။ သူတို့တွေဟာ ကာကွယ်ဖို့အလွန် အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ဖို့ကလည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ် ။ ဆီးချိုသွေးချိုနဲ့ သွေး တိုးကို လည်း ထိမ်း ချုပ်ကုသထားရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
Oxford Clinical Hand Book
This entry was posted on February 8, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Rohingya History
ဆင်းရဲသားများ အတွက် ချီကာကိုမြိုမှ မွတ်စလင်များ၏ လူမှုကူညီရေး လုပ်ဆောင်မှုများ →